Ndeipi nzira dzekukwezva zvakanaka backlinks kune webhusaiti yako?
Ndinoda kutanga nyaya ino netsanangudzo pfupi ye backlink kune avo vatsva munyaya iyi. A backlink inopinda hyperlink kubva pane imwe peji kuenda kune imwe. Sezvo mutemo, kubatana kunowanikwa mumusoro uye kunotaridzika semagwaro anchokwe. Nokutsvaga pane zvinyorwa izvi, unoenda kunotsanangurwa nyaya kana webhusaiti inotaurwa munyaya ino. Kubatana kwakadaro kunowanzopa vashandisi ruzivo runobatsira uye vanobatsira vadzidzisi vewebhu vanovandudza nzvimbo yavo yewebsite rankings kana zvose zvichiitwa zvakanaka - is a debt resolution program safe.
Nyaya ino yakagadzirirwa kukudzidzisa iwe kuti uwane sei backlinks kuwebsite yako. Ndinoda kukusimbisa nemashandisirwo aunoda kuti uwane zvakakosha kumashure uye unowedzera kusvika kwako.
Hazvirevi zvese zvekare zvakasikwa zvakafanana. Ndicho chikonzero iwe unofanirwa kuchenjerera zvikuru paunenge uchisangana newebsite yako. Sezvo mutemo, backlinks inoshandiswa nokuda kwezvinangwa zviviri. Chokutanga ndechokubatsira webhusaiti kuti ibudirire hutano hwehutano jisi uye uwedzere simba rechirwere pawebhu. Chechipiri ndechekukonzera kukuvadza nemaune kumakwikwi emakwikwi kana kusingaiti nemaune.
Nzira yekusiyanisa zvakadini backlink yakakwirira?
Kazhinji kutaura, zvakanyanya kumashure kumashure ndezvinobva kune zvakanakisisa zvewebhu. Izvo zvakakosha uye zvine tsika dzakagadzirwa. Kana vanhu vakawanda vanobatanidza kunzvimbo dzakanakisisa dzemasimiti, zviri nani kuti nzvimbo yekutsvaga injini ishandiswe. Google ichaona zvikwangwani zvakadaro uye mubairo wekubatanidza nzvimbo neyakakwirira yepamusoro uye mukurumbira wakanaka. Ndizvo chaizvo zvaunoda kutsvaga mukuvakwa kwekubatana.
Zvisinei, sezvandakambotaura kare zvisati zvisikwa zvose zvakasikwa zvakasikwa zvakafanana uye zvichibva kure nazvo zvose zvakafanana zvakakosha. Ndicho chikonzero webmasters vanofanira kunyatsoziva chii chinonzi backlink yakakwirira.
Ngatitsanangurirei zvimwe zvezvinhu zvinokosha zvehupenyu, zvakasununguka backlink:
inobatanidza niche yewebsite yakakurudzirwa;
inobva kunzvimbo inotendwa yewebhu;
inotumira mumigwagwa inoreva;
yakanyatsogadziriswa mune zviri mukati pewebsite;
haina kubhadharwa kana kudzokerazve;
haina kutaridzika sechishambadziro;
inobatsira PageRank yako.
Izvo zvakashata zvakashamwaridzana zvakaoma kuwana. Ndicho chikonzero ivo vanokoshesa zvikuru nekutsvaga injini nevashandisi. Uyezve, unoda kuwana hukama hwakadaro kubva pamhando dzakasiyana-siyana, kwete 100 backlinks kubva pane imwe nzvimbo yeP PR. Ramba uchifunga kuti Google inogona kungoona kana iwe uchiedza kunyengedza.
Ndedzipi nzira dzakanakisisa dzekuwana zvakakosha kumashure panzvimbo yako?
Chinhu chokutanga chaunoda kunzwisisa ndechekuti backlink inofanira kuvakwa, isina kutengwa. Iyo yakakwana ingano yekuvaka sarudzo ichave yakabatanidzwa nebasa rakaoma, uye izvi zvose. Zvechokwadi, iwe uchapedza nguva yakawanda uchiumba hukama zvakaenzana. Zvisinei, iwe uchava nechokwadi kuti hukama huno huchakupa migumisiro yakareba kwenguva refu.
Kune dzimwe nzira dzekuwana zvakakosha shure:
Kuti uwane zvakakosha kumashure, iwe unogona kungoisa zita rako uye ruzivo pamusoro pezvinyorwa zvepamusoro, zvevanhu zvakagadziriswa. Zvinogona kunge zvakadaro kuitira kuti iwe unofanirwa kubhadhara kune dzimwe dzero idzi. Zvisinei, usati wagadzirisa chero zvipi zvese zvekuvakira mazano, iwe unofanirwa kuve nechokwadi kuti haisi spammy website.
Imwe nzira inobatsira yekuvakira nayo ndeyekuti muve mutambi wemugovera. Shingairira niche yakabatana yakananga blog uye muparidze kune dzimwe nzvimbo dzinofadza uye dzinobatanidza nehutano huripo hunoendesa kunzvimbo yako.